Laba qalab oo wanaagsan oo aad iskaga dulqaadi karto NVIDIA iyo AMD GPU-ga hoostooda Linux | Laga soo bilaabo Linux
Waxaa jira dhowr siyaabood oo loo sameeyo saacad dheeri ah CPU-ga iyo GPU-ga qaybintayada 'GNU / Linux'. Iyo inkasta oo aan hada diirada saari doonno xad-dhaafka GPU-da, si aan u nidhaahno haddii aad ka fekereyso inaad ku samayso ficilkan kombiyuutarkaaga, waxa ugu horreeya ayaa ah inaad tixgeliso halista ay keeni karto, maaddaama aad nidaamka u hoggaansami doonto a heerkul aad u sarreeya iyo culeys maskaxeed, taas oo yareyn karta adeeggooda si weyn, gaar ahaan haddii aadan si fiican u hagaajin qaboojinta. Sidaa darteed, ilaa aad ka ogaato waxaad sameyneyso mooyee, ha isku dayin dhaqan nuucaan ah ...
Horeyba waxaa ujiray tilmaamo qafiifinaya microprocessor iyo kan labadaba kaarka sawirada shabakadda, iyo dabcan sidoo kale waxaa jira iyaga si ay u sharxaan hababka tallaabo tallaabo ah ee ka yimaada disto Linux ah. Halkan waxa kaliya ee aan kuu soo bandhigi doono waa laba dariiqo ama qalab wanaagsan oo looga dhigi karo qaab raaxo leh, in kasta oo aan qorsheyn karno boosteejo ahaan hage dhammaystiran oo lagu sharraxayo hannaanka tallaabo-tallaabo ee GPU iyo CPU labadaba (Waxaan u qoraa mustaqbalka).
Loogu talagalay GP-yada AMD: GP-yada AMD, waxaan kugula talin lahaa inaad aado isha furan ee wadayaasha AMDGPU. Haddii aad rabto inaad ogaato habka, waxaad arki doontaa inaysan dhib lahayn haba yaraatee, kaliya qaado tallaabooyinka ku habboon ee lagu xakameynayo heerkulka iyo hagaajinta qaboojinta si looga fogaado dhibaatooyinka. Nidaamka xad-dhaafka ah wuxuu si fudud ula socon doonaa dhawr tallaabo oo fudud sida aad ku arki karto gudaha hagahan. Waxaan sidoo kale kugula talinayaa qaar ka mid ah qalabka isugeynaya sida kan ka yimid GitHubCase Xaaladda AMDGPU Pro ma awoodi doontid.
Loogu talagalay GP-yada NVIDIA: haddii aad haysato kaarka sawir gacmeedka 'NVIDIA', waxaad arki doontaa inay wax waliba sahlanaan karaan, maxaa yeelay waxaad sidoo kale ka heli doontaa aalado garaaf ah oo leh GUI kuwaas oo xoogaa macquul ah oo la qabsan karo Sida xaalku yahay Nvidiux.
Labada xaalad iyo mid kale, waad iska badin kartaa oo waad hoos dhigi kartaa, tan ugu dambeysa haddii aad rabto inaad hoos u dhigto heerkulka ama isticmaalka tamarta qalabkaaga waxoogaa ah haddii aadan u baahnayn waxqabad aad u badan. In kasta oo kuwa ugu caansan ay yihiin kuwa ugu horreeya, gaar ahaan kuwa hadda ku hawlan macdanta ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Laba qalab oo wanaagsan oo aad iskaga dulqaadi karto NVIDIA iyo AMD GPU hoostooda Linux
Sidee loo abuuraa mug LVM aasaasi ah qaybinta Linux kasta?
Maamulaha Red Hat wuxuu yiri IBM waa inuu ka tagaa dhaqanka furan ee furan